१५०० वर्ष पुरानो भीरमा झुण्डिएको मन्दिर
समाचार : सूचना र जानाकारी
करीब २ हजार वर्ष लगाएर बनाइएको (ग्रेट वाल) देखेरै थाहा हुन्छ चिनियाँहरु प्रचीन कालदेखि नै मेहनती थिए । चिनियाँ को मेहनतले बनेको एक प्राचीन मन्दिरले संसारलाई चकित पारेको छ ।
विषेश प्रकारको बलियो र लचिलो काठबाट बनाइएकाले यो यति बलियो रहेको जानकारहरु बताउँछन । हालसम्म यसले कयौं शक्तिशाली भूकम्प झेलिसेको छ र भनिन्छ जुनसुकै धर्म मान्ने मानिसको लागि पनि यो आस्थाको धरोहर रहेको छ जहाँ मनले चाहेको पुरा हुने बिश्वास गरिन्छ ।
२४ घण्टासम्म भारी वर्षा हुने, बाढी
कृषि उद्यम गर्न ३. ३ प्रतिशत व्याजमै
गल्ती नगर्नेले केही सिक्दैन - अल्बर्ट
होशियार ! काठमाडौंमा मोटरसाइकल चोरको
नेपालमा २५ लाखमै कलेजोको पहिलो पटक
नेपाली विकिपिडिया विश्वका विकीहरूको
मन्टेश्वरीमा भर्ना खुल्यो